Nepal Samaya | ६ जनाको ज्यान लिने संखुवासभा घटनाको यस्तो छ योजना र नालीबेली
६ जनाको ज्यान लिने संखुवासभा घटनाको यस्तो छ योजना र नालीबेली
काठमाडौं– संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ खोलागाउँका तेजबहादुर कार्कीसहित परिवारका ६ जनाको हत्या योजनाबद्ध रूपमा भएको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा थप चारजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। पक्राउ परेका ४७ वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, २८ वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, ४९ वर्षीय रणबहादुर कार्की र १७ वर्षीय नरेश कार्कीको बयानपछि प्रहरीले उनीहरुलाई सोमबार चैनपुरमा सार्वजनिक गरेको छ। यीमध्ये खड्गबहादुर घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
योजना अघिल्लो रातको
भदौ २० गते राति लोकबहादुर कार्कीसहित पाँच जनाको समूहले उनकै घरमा हत्याको योजना बनाएको प्रहरी अनुसन्धानले औंल्याएको छ। २१ गते तेजबहादुरको पीपलेस्थित खेतमा खड्गबहादुर कार्की, हस्तबहादुर कार्की, लोकबहादुर कार्की र नरेश कार्की धान गोड्न जाने तयारीमा थिए। सोही क्रममा २० गते साँझ उनीहरूले योजना बनाएका थिए।
२१ गते बिहान तेजबहादुर कार्की खेताला बोलाउन लोकबहादुरको घरमा आउने र सोही अवसरमा मौका छोपी उनी र पत्नी कमला कार्कीको हत्या गर्ने योजना बनाएको अभियुक्तहरुको बयान उधृत गर्दै संखुवासभाका डीएसी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पहिला तेजकुमार र कमलाको हत्या गर्ने र अन्यले थाहा पाए भने उनीहरूको पनि हत्या गर्ने साथै अनुकूल मिलेमा तेजबहादुरको घरमा भएको धनमाल समेत लैजाने योजना बनेको रहेछ।’
योजनाअनुसार मृतक तेजबहादुर कार्की खेताला आउने निश्चित गर्न खड्गबहादुर तेजबहादुरको घरमा गएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनले तेजबहादुरलाई ‘लोकबहादुर अल्छी छ घरमै गएर खेताला निश्चित गर्नु’ भने। सोहीअनुसार तेजबहादुर लोकबहादुरको घरतिर जाँदै गर्दा खड्गबहादुर र हस्तबहादुर बाटोमा चिर्पट बोकी तयारी अवस्थामा थिए।
तेजबहादुरले ‘लोकेले मार्‍यो, मलाई नमार’ भन्दै गुहार सुनेपछि उनकी श्रीमती ‘मेरो श्रीमानलाई नमार भन्दै आएकी थिइन्। सोही क्रममा लोकबहादुरले कमलालाई प्रहार गरेका थिए। उनको घाँटीमा हस्तबहादुरले छुरा प्रहार गरेका थिए। बुहारी रञ्जनालाई नरेशले ठेली खोल्सामा झारेका थिए।
त्यसपछि तेजबहादुर कार्कीले लोकबहादुरलाई ‘अल्छी अझैसम्म उठेको छैनस्’ भन्दै कराए। उनले कराएपछि लोकबहादुर, उनका भाइ नरेश र बाबु रणबहादुर पनि उठेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा डीएसपी सुवेदीले भने, ‘घरबाट फर्कने क्रममा लोकबहादुरले भाइ नरेशलाई इसारा गरी आफू दाउराको चिर्पट र अलैंची काट्ने चक्कु बोकी पछिपछि गएर गोगनेको रुख नजिक तेजबहादुरको टाउकामा प्रहार गरी लडाएका थिए।’ त्यसपछि खड्गबहादुर र हस्तबहादुरले तेजबहादुरमाथि चिर्पट प्रहार गरेर डिलबाट लडाएका थिए। सोही क्रममा तेजबहादुरको मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि तेजबहादुरको घरमा भेला भएका गाउँले र आफन्त।
तेजबहादुरले ‘लोकेले मार्‍यो, मलाई नमार’ भन्दै गुहार सुनेपछि उनकी श्रीमती ‘मेरो श्रीमानलाई नमार भन्दै आएकी थिइन्। सोही क्रममा लोकबहादुरले कमलालाई प्रहार गरेका थिए। उनको घाँटीमा हस्तबहादुरले छुरा प्रहार गरेका थिए। बुहारी रञ्जनालाई नरेशले ठेली खोल्सामा झारेका थिए। अनि खड्गबहादुर, लोकबहादुृर र हस्तबहादुर मिलेर हत्या गरेका थिए। त्यसपछि रणबहादुर र नरेश मिलेर कमलाको लास भएको ठाउँमा लगेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
घटनाका बेला मृतक नाबालकहरू दिपेन र गोमासमेत घर नजिकैको बाटोमा आएको देखेपछि हस्तबहादुर र लोकबहादुरले बाटो छेकेका थिए। त्यसपछि लोकबहादुरले चिर्पटले हिर्काएका थिए भने घाँटी बटारेर हत्या गरेका थिए। अनि पाँचै जना जना अभियुक्त मृतकको घरतर्फ लागेका थिए। जहाँ ८४ वर्षीया पार्वती कार्की मकै नंग्गाइरहेकी थिइन्। हस्तबहादुरले ती वृद्धालाई समातेर घरपछाडि गोठ नजिक लगे, लोकबहादुरले टाउको भित्तामा ठोक्काए, घाँटी बटारे र हत्या गरिदिए। त्यसपछि सबै जना घटनामा प्रयोग भएको चिर्पट र छुरी लोकबहादुरको घरमा लिएर गए। रगत पखालेर छुरी धोए भने चिर्पट आगोमा डढाए। अनि रगत लागेका कपडा समेत लुकाएका थिए। फर्कने क्रममा रञ्जनाको ओप्पो मोबाइल नरेशले लिएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनले मोबाहइल स्विच अफ गरेर घरमुनिको ओडारमा लगेर लुकाएका थिए। त्यसपछि उनीहरुबीच कसैले सोधेमा घटनाका बारेमा कुनै पनि कुरा नसुनेको र थाहा नभएको बताउने सहमति भएको थियो। प्रहरी आई पत्ता लगाएमा लोकबहादुरले मानसिक रोगको औषधि खाने गरेको र उनले नै जिम्मा लिने सल्लाह पनि उनीहरूबीच भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। सोही आधारमा लोकबहादुरले पहिला घटनामा संलग्न भएको स्वीकार गरेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
घटनामा संलग्न चारैजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुन्सधान भइरहेको डीएसपी सुवेदीले बताए। उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा सबै अभियुक्तले घटना स्वीकार गरेका छन्। घटनामा प्रयोग भएको छुरी, कपडा, हराएको मोबाइल समेत बरामद गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यस्तो रहेछ हत्याको कारण
खड्गबहादुर नियमित रक्सी खान्थे। उनी श्रीमती र परिवारका सदस्यलाई कुटपिट गरिरहन्थे। गाली गर्थे। यो देखेपछि तेजबहादुर ‘तँ जँड्याहा किन यसो गर्छस्’ भनी हप्काउँथे। तेजबहादुरको यस्तो व्यवहार खड्गबहादुरलाई पनि मन पर्दैनथ्यो। उनी पनि बेलाबेलामा ‘तँलाई के मतलब तँलाई मार्छु’ भनी धम्क्याउँथे।
घटनाका आरोपित लोकबहादुर कार्की।
यस्तै तेजबहादुरले लोकबहादुरलाई पनि ‘तँ पागल, अल्छी, केही काम गर्न सक्दैनस्’ भन्थे। हुन पनि लोकबहादुर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि काममा त्यति जाँगर देखाउँदैनथे। यस्तै तेजबहादुरले नरेशलाई पनि ‘तँ डुँडे काम नलाग्ने भइस्’ भन्ने गर्थे। प्रहरीका अनुसार उनले रणबहादुरलाई समेत ‘तँ लठेब्रो केही गर्न सक्दैनस्’ भन्ने गरेका थिए। यसरी तेजबहादुरले हेपाइ नसहेपछि उनीहरू सबैले ईख पालेर बसेका थिए। घटनाका दिन अभियुक्तहरूसमेत मृतकको खेतमा धान गोड्न जानुपर्ने भएकाले सोही मौका छोपेर योजना बनाएका थिए।
खड्गबहादुर र रणबहादुर दाजु भाइ हुन् भने हस्तबहादुर खड्गबहादुरका छोरा हुन्। नरेश रणबहादुरका छोरा हुन्। यस्तै यसअघि पक्राउ परेका लोकबहादुर पनि रणबहादुरका छोरा हुन्।
संखुवासभा हत्याकाण्ड, स्थानीय भन्छन् –आफन्तबाटै नरसंहार होला भनेर सोचेकै थिएनौं
मादी हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार खड्‌गबहादुर कार्की सहित चार पक्राउ
संखुवासभा घटना, आवेगमा आएर चिर्पट प्रहार गरी ६ जनाको हत्या गरेको हुँ : लोकबहादुर कार्की
एकैजनाबाट भएको हो त ६ जनाको हत्या ? संखुवासभा घटनाबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरी
संखुवासभा हत्या घटना : शव भेटिएको खबर गर्ने नै हत्यामा संलग्न!
संखुवासभा हत्या घटना : लोकबहादुरतर्फ अनि सोझियो प्रहरी अनुसन्धानको 'सुई'
संखुवासभामा भएको कहालीलाग्दो घटनाका आरोपित पक्राउ
प्रकाशित: September 20, 2021 | 12:56:26 काठमाडौं, सोमबार, असोज ४, २०७८
प्रदेश १ मा पछिल्लो १२ दिनमा सवारी दुर्घटनामा परि १७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
दुई वर्षभित्रै तावाखोलामा पक्की पुल बन्‍ने
ताप्लेजुङको सिरिजंघा र सिदिङ्वा गाउँपालिका जोड्नेगरी तावाखोलामा पक्की पुल बन्ने भएको छ।
धरानस्थित कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन गर्दै आएको पशुहाटबाट यो वर्षको दसैँमा रु सात करोड बराबरको खसीबोका कारोबार भएको छ।
तेह्रथुम जिल्लाको छथर गाउँपालिकामा पति र पत्नीबीच विवादपछि कुटाकुट हुँदा पतिको मृत्यृ भएको छ भने पत्नी गम्भीर घाइते भएकी छन्।
कोसी किनारामा प्याराग्लाइडिङ खस्दा वडाध्यक्ष घाइते
भेडेटारबाट उडेको प्याराग्लाइडिङ सप्तकोसी नदीको किनारामा खसेको छ।
आहा कन्याम !
संघले घोडामा चढेर घुम्न चाहने पर्यटकका लागि ६०० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ। घोडामा चढेर फोटो खिच्दा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।